Amazon ကုမ္ပဏီဟာ ပရိသတ်တွေ တော်တော်များများ စိတ်ဝင်စားနေကြတဲ့ “The Lord of the Rings” စီးရီးအတွက် သရုပ်ဆောင်တချို့ကို ပထမဆုံးအနေနဲ့ ကြေညာလိုက်ရာမှာတော့ “Game of Thrones” ထဲက ဝါရင့်သရုပ်ဆောင်နှစ်ဦး ပါဝင်လာတာကို တွေ့ရပါတယ်။
စီးရီးထုတ်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းတွေကိုတော့ လာမယ့်လ ကျရင် နယူးဇီလန်နိုင်ငံမှာ စတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ သရုပ်ဆောင် ၁၅ ဦးစာရင်းမှာ HBO ရဲ့ “Game of Thrones” ထဲ Benjen Stark အဖြစ် သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ Joseph Mawle နဲ့ Ned Stark အငယ်ပိုင်းအဖြစ် သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ Robert Aramayo တို့လိုမျိုး ဗြိတိသျှသရုပ်ဆောင်တွေ ပါဝင်တာကို တွေ့ရပါတယ်။
“Lord of the Rings” စီးရီးမှာ ပါဝင်လာမယ့် တခြားသရုပ်ဆောင်တွေကတော့ ဗြိတိသျှ ပြဇာတ်မင်းသား Owain Arthur၊ ဗြိတိသျှနွယ်ဖွား အီရန်မင်းသမီး Nazanin Boniadi၊ သြစတြေးလျ မင်းသား Tom Budge ၊ ဗြိတိသျှ မင်းသမီး Morfydd Clark နဲ့ ဆလိုဗက်ကီးယားနွယ်ဖွား အမေရိကန်မင်းသမီး Ema Horvath တို့ ပါဝင်တယ်လို့ ကုမ္ပဏီက ဆိုပါတယ်။
စီးရီးစီစဉ်သူ J.D. Payne နဲ့ Patrick McKay တို့က “တကမ္ဘာလုံးမှာ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ရှာဖွေခဲ့ပြီးတဲ့နောက် ကျနော်တို့ဟာ Amazon ရဲ့ The Lord of the Rings စီးရီးမှာ ပါဝင်မယ့် ထူးခြားတဲ့ တင်ဆက်သူတွေရဲ့ ပထမဆုံးအဖွဲ့ကို နောက်ဆုံးမှာတော့ ဂုဏ်ယူစွာနဲ့ချပြနိုင်ခဲ့ပါပြီ” လို့ ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာ ပြောဆိုထားပါတယ်။
အဲ့ဒီထူးခြားတဲ့ အမျိုးသားနဲ့ အမျိုးသမီးတွေဟာ ကမ္ဘာတဝန်းမှာ ရှိတဲ့ ပရိသတ်တွေအတွက် အလယ်ခေတ်ကမ္ဘာကို ပြန်ခေါ်သွားနိုင်ဖို့ ကြိုးစားကြမှာဖြစ်ပါတယ်လို့လည်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
အခု ရုပ်သံကနေ ထုတ်လွှင့်မယ့် စီးရီးကတော့ စာရေးသူ J.R.R. Tolkien ရဲ့ “The Fellowship of the Ring” ကို အခြေခံထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းဖြစ်ပြီး အလယ်ခေတ် စိတ်ကူးယဉ်နယ်မြေမှာ ဇာတ်အိမ်တည်ထားတဲ့ သုံးကားတွဲ ဇာတ်အိမ် ဖြစ်ပါတယ်။
စီးရီးအတွက် အဓိကကျတဲ့ နောက်ထပ် သရုပ်ဆောင်တချို့ကို ထုတ်ဖော်ဖို့ ကျန်သေးတယ်လို့ ကုမ္ပဏီရဲ့ ရုပ်သံပူးတွဲအကြီးအကဲ Vernon Sanders က ဆိုပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းမှာ သရုပ်ဆောင်ရမယ့် သရုပ်ဆောင်တွေရဲ့ ဇာတ်ကောင်အကြောင်း အသေးစိတ်ကိုတော့ ကုမ္ပဏီက ပြောကြားတာ မရှိသေးပါဘူး။
Topics: "Lord of the Rings" စီးရီး, Game Of Thrones, ရွေးချယ်, သရုပ်ဆောင်